जनतामा लोकप्रिय ‘गोपाल कार्की’ - Nigranitimes
होमपेज / जीवनशैली / जनतामा लोकप्रिय ‘गोपाल कार्की’
गोपाल बहादुर कार्कीको जन्म वि. सं. २०१८ साल माघ ५ गते तेह्रथुमको ओयाक्जुङमा आमा रुपादेवी कार्कीको कोखबाट जेठो सुपुत्रको रुपमा भएको थियो । उनी सानै हुदाँ उनको बुवाको मृत्यु भए पश्चात् आमा एक्लैले दुःख गरेर पढाउनु भयो । उहाँले तेह्रथुमकै सिंहदेवी माविमा ८ सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको थियो । त्यस पश्चात उहाँको मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा बसोबास भयो । उहाँले वि.सं.२०३८ सालमा जनसेवा माविबाट एसएलसी सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको थियो ।
उ बेला २००७ सालमा राजनीतिक घटनाक्रमले कोल्टे फेर्दै गर्दा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदै गरेको बेलामा कुनै नेपाली कांग्रेसको फटाहा समुहले हाम्रो घरमा चोरी गरेछन । घरमा भएका सम्पूर्ण गरगहनादेखि नगद सबै लुटपाट गरेका थिए । त्यसपछी आमाले आफ्नो छोरालाई यसको विरुद्धमा लड्न समाजसेवी र राजनीतिकर्मी बनाउने अठोट लिनुभए पछि गोपाल बहादुरको राजनीतिक यात्र सुरु हुन्छ । र, आजसम्म पनि उहाँलाई आमाकै साथ र हौसला रहेको कुरा बताउँनुहुन्छ । उहाँले एमाले पार्टी रोज्नुकै कारणचै यसो भन्नुहुन्छ –‘पहाडमा शिक्षा लिने क्रममा २०३५ सालमा नेता भानुभक्त ढकालले विद्यार्थीहरुलाई भेला गरेर भाषण दिदँै हुनुहुन्थ्यो, खुब चाख लगाएर म सुनी रहेको थिए । कुरा ठिकै गरिरहेका थिए । विद्यार्थीकै हितका लागि आवाज उठाई रहनु भएको थियो ।
एक्कासी त्यहाँ माहोल अर्कै बन्यो प्रहरी आएर कुट्न थोले अरु सवै भाग्यौं । म भाग्दा भाग्दै लडे, भिरबाट तल पुगि सकेको थिए । किताबको झोला मसँग थिएन, मेरो कपडा च्यातिएको थियो । त्यसबेला मलाई एकजनाले हात दिर्दै उठ्नु भन्नु भयो, अहिले सम्झिदा त्यो हात दिने मान्छे त भानुभक्त ढकाल पो रहेछ । यसरी विद्यार्थी जीवनमा राजनीतिक र समाजसेवाको उर्जा त्यहाँबाट बढ्दै गएको थियो ।’
२०३९ साल देखि ४५ साल सम्म भूमिगत हुनु प¥यो । त्यो बेला पनि रातीराती पार्टीका विभिन्न खाले प्रशिक्षणमा सरिक हुन कहिले सुनवर्शी, कहिले रंगेली साथै अन्य धेरै ठाँउमा पुग्ने गदथेँ । उतिवेला प्रशिक्षण जननेता मदन भण्डारीले दिनुभएको रहेछ । उनी मदन भण्डारीको प्रशिक्षणमा आफूसँगै विभिन्न आन्दोलनमा आफुसँगै अरु २ जना थम्शेर र चन्द्र राईलाई पनि सम्झँछन् । उनिहरु मिलेर रातभरी कहाँ जाने के गर्ने योजना बुन्ने साथीहरु रहेका थिए । यसरी ६ वर्ष लामो भूमिगत पछि २०४६ मा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु भए यो बेला उहाँको भुमिका सशक्त रहेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ । २०४३ सालमा गाउँ कमिटी, २०४७ सालमा इलाका सदस्य र हाल नेकपा एमाले वडा नं. ३ वडा कमिटीका अध्यक्ष रहेका छन् ।
आफुलाई राजनीतिककर्मी भन्दा पहिला सामाजसेवी भन्न रुचाउँनुहुन्छ । उ बेला उहाँसँग एउटा साइकल थियो । उहाँ त्यही साइलकमा जनताका काम गर्न विराटनगरसम्म पुग्ने र घर फर्कीने गर्नुहुन्थ्यो । कोही बिरामी हुँदा त्यही साइकलमा राखेर लानुहुथ्यो । प्यारालाइसिस भएको बिरामी, नागरिकताका लागि २÷३ दिन विराटनगर धाएर पनि काम सकेर आउनुहुन्थ्यो । जनताले पिटाई खान्छन भनेर जनयुद्ध कालमा धेरैको बिजुलीको बिल तिरिदिनुहुन्थ्यो । धेरै मुद्दाका लागि खाइ नखाई विराटनगर पुग्ने गर्नुभएको थियो ।
विगतमा चुनावको अनुभव
वि.सं. २०४८ सालमा बयरवन साविक ५ बाट वडा अध्यक्ष पदका उठे र जिते पनि । यस्तै, उनले २०५४ सालमा पनि पुनः वडा अध्यक्षमा जिते र १० वर्ष जनता र समाजको सेवा गरे । उहाँ भन्नुहुन्छ –‘उ बेला बजेट जम्मा ८ हजार मात्र आउँथ्यो । हामीले सुरुमा आएको जम्मा १ लाख ७० हजार बजेटबाट धम्कुवाको काम गर्यौ । त्यहाँ पहिला ठुलो गहिरो होली थियो, त्यसलाई पुर्ने काम गर्यौ । उ बेला अध्यक्ष हुदाँ साविक ५ को बाबाजी कुटीदेखि मिलन चोक जोडने खोलामा पुल नहुँदा बाटो नहुँदा कति गाइवस्तु लडेर खोलामा मरे । त्यो पीरले उहाँलाई सताएको थियो र अध्यक्ष भएपछि त्यो बाटो र पुल ७ दिनसम्म लगाएर जनताको श्रमदान र केही अनुदानमा सम्पन्न भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ । उहाँ अहिले भन्नुहुन्छ–‘उ बेला पार्टी हेरेर काम गरिएन मैले जनताको काम गरे । अहिले मैले काम गरेको धेरै जनता अरु फरक–फरक पार्टीका सक्रिय सदस्य रहेछन ।
वडा विकासका योजनाहरु
‘समृद्ध वडा, सुखी वडाबासी’ मेरो नारा हो । मसँग एजेन्डा छ्न । तसर्थ मैले फेरी पनि वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएको छु । मेरो योजना भनेको पहिला त गरिबी न्यूनीकरणनै रहेको छ । सतार बस्ती पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । त्यसको पहिलो कारण भनेको शिक्षाको कमि हो त्यसैले म त्यहाँ शिक्षाको ज्योति पु¥याउन भरपुर प्रयास गर्छु । यस्तै, जेष्ठ नागरिकलाई दिनभरी भेला भएर गफ गर्ने सितल छाहरी, भजन गाउने घरको निर्माण गर्छु । आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्छु । नगदे बालिमा फोकस गर्नेछु । पशुपालनमा नयाँपन ल्याउनेछु । वडाका युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउँनेछु । वडाबासिलाई आत्मनिर्भर बनाउँनेछु ।